Wararka - Waa maxay Gallium Nitride?
Gallium Nitride waa binary III / V tooska loo yaqaan 'semiconductor' kaas oo si fiican ugu habboon transistors-awood sare leh oo awood u leh inay ku shaqeeyaan heerkul sarreeya. Laga soo bilaabo 1990-yadii, waxaa si caadi ah loogu isticmaali jiray diode-yada iftiinka dhaliya (LED). Gallium nitride waxay bixisaa nal buluug ah oo loo isticmaalo akhrinta qalabka 'Blu-ray'. Intaa waxaa sii dheer, gallium nitride waxaa loo isticmaalaa aaladaha korontada ku shaqeeya, qalabka RF, laser, iyo photonics. Mustaqbalka, waxaan ku arki doonnaa GaN teknolojiyadda dareeraha.
Sanadkii 2006, transistors GaN-mode-enhanment-mode, oo mararka qaar loo yaqaan 'GaN FETs', ayaa bilaabay in la soo saaro iyadoo lagu kobcinayo lakab khafiif ah oo GaN ah oo ku saabsan lakabka AIN ee shaandhada silikoon ee caadiga ah iyadoo la adeegsanayo biraha kiimikada dabiiciga ah ee kiimikada (MOCVD). Lakabka AIN wuxuu u dhaqmaa sidii keyd u dhexeeya substrate iyo GaN.
Nidaamkan cusub wuxuu awood u siiyay transistors-ka 'gallium nitride' in lagu soo saaro isla warshadaha jira ee silikoon, iyadoo la adeegsanayo isla habab wax soo saar. Adoo adeegsanaya nidaam la yaqaan, tani waxay u oggolaaneysaa mid la mid ah, kharashyada wax soo saarka oo hooseeya waxayna yareyneysaa caqabadda in la korsado transistors yaryar oo leh waxqabad aad u wanaagsan.
Si loo sii sharxo, dhammaan qalabka semiconductor waxay leeyihiin waxa loo yaqaan "bandgap". Tani waa kaladuwanaansho tamar oo adag meel elektaroonig ah uusan ka jiri karin. Si fudud haddii loo dhigo, bandgap wuxuu la xiriiraa sida wanaagsan ee walxo adag u u dhaqmi karo koronto. Gallium nitride wuxuu leeyahay 3.4 eV bandgap, marka la barbar dhigo silsiladda 1.12 eV bandgap. Farqiga ballaadhan ee 'Gallium nitride' ayaa ka dhigan inuu sii wadi karo danab ka sarreeya iyo heerkul ka sarreeya silsiladda 'MOSFETs'. Bandgap-kan ballaaran wuxuu awood u siinayaa gallium nitride in lagu dabaqo qalabka korantada iyo korantada sare ee optoelectronic.
Awoodda ay ku shaqeyn karto heerkul aad u sarreeya iyo danab ka badan kuwa gallium arsenide (GaAs) transistors sidoo kale waxay sameysaa gallium nitride awood-siiyayaal koronto ku habboon oo loogu talagalay aaladda microwave iyo terahertz (ThZ), sida sawir qaadista iyo dareemidda, suuqa mustaqbalka ee kor lagu soo sheegay. Teknolojiyada GaN ayaa halkan taal waxayna ballanqaadaysaa inay wax walba ka wanaajineyso.